Semalt - 8 Uru Ndị Ukwuu nke Google Wepụ
Ihe nlekota Google bụ ngwá ọrụ dị mkpa nchịkọta data site n'aka Google njikọ na enwere ike itinye ya na mbadamba, smartphones ma ọ bụ ngwa kọmputa. Ndị na-eme nchọpụta na-achọkarị ozi iji kwado ụdị ha ma gosi nkwenye ha. N'otu aka ahụ, ụlọ ọrụ dị mkpa ka e wepụtara data iji zụlite azụmahịa ha ma hụkwuo ndị ahịa n'ụwa nile. A kọwaa ụfọdụ n'ime uru ndị dị mkpa nke nchịkọta Google.
1. Hụpụta data:
A na-egosiputa data na ụdị na-adịghị edozi ahụ ma dị mma. Nchịkọta nke Google na-eme ka ọ dị mfe ịnakọta data ma hazie ya dịka ọ bụla ị chọrọ. Ọ na-enyere gị aka ịchọta ozi sitere na nọmba kọntaktị, adreesị ozi-e, aha, na saịtị ndị ọrụ. Nke a bụ ngwá ọrụ mmezi kwesịrị ekwesị nke nwere ike ịkewapụ data na-ezighị ezi site na ozi bara uru na-enye gị nsonaazụ kacha mma na nke kachasị mma.
2. Ihe nchịkọta ọrụ ọkachamara:
Uru abụọ nke isi nchịkọta nke Google bụ na ọ na-eji nlezianya kpochapụ ihe ndị ọkachamara, ọ dịghịkwa echegbu onwe gị gbasara ogo data. Ngwá ọrụ a dị ezigbo mma maka saịtị ecommerce, chọta ndepụta ndị ọkachamara, hazie data ahụ, ma nweta ihe ndị ị chọrọ na ihe nkeji.
3. Ngwa ngwa na eziokwu:
Site na ọrụ a, ị nwere ike ijide n'aka data ziri ezi. Ntugharị Google na-eme ngwa ngwa ma na-arụ ọrụ ụfọdụ n'otu oge ahụ. E jiri ya tụnyere ndị na-ahụ maka ndị ọzọ nkịtị, ngwá ọrụ a nwere ike wepụ ihe ọmụma site na njikọta njikọ Google dị iche iche na ọsọ ọsọ ziri ezi na-anọgide na-aga n'ihu na usoro.
4. Nchịkọta akụkọ bara uru na ihe bara uru:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịnakọta ozi bara uru na bara uru, ị nwere ike iji ihe nchịkọta Google iji nweta ọrụ gị. Di iche iche na webmasters na ndi mmadu mejuputara oru a iji nweta ma asusu na ihe omuma ala. O nwere ihe ndị pụrụ iche na-eme ka o doo anya na e nyere ndokwa na-ezighị ezi.
5. Uru uru:
Anyị maara na ndị na-ese akwụkwọ dị iche iche na-enye ọrụ na uru ndị dị ntakịrị, mana nchịkọta nke Google bụ ọrụ dị elu ma dị egwu.Ị nwere ike wepu ihe ruru iri puku njikọ na ngwá ọrụ a, chekwaa data na CSV na JSON formats, ma ọ bụ ibudata ya na draịvụ ike gị maka iji ọrụ ntanetị. Ọ bara uru maka mmemme ma nwee ike ịnweta site na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka.
6. Ebumnobi dị ike na e-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ:
Na Google scraper, ị nwere ike nwaa ike na e-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ozi sitere na Amazon na eBay, ịnwere ike iji ngwá ọrụ a mee ihe iji rụọ ọrụ gị. E nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na ọtụtụ ọnọdụ, kwuo, koodu zip, na adreesị email n'ime sekọnd. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnakọta ozi banyere ngwaahịa dị iche iche, nkọwa ha, na ihe oyiyi.
7. Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi:
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike irite uru site na ngwaọrụ a ma nwee ike ịnakọta data site na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi ma chọpụta isiokwu ndị na-ewu ewu kwa ụbọchị. Ọrụ a nke igwe ojii na-enye data oge, na-azọpụta oge gị, ma meziwanye arụmọrụ ọrụ gị.
8. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ njem:
Ụlọ ọrụ ndị njem na-achọ iwepu data site na ọnụ ụzọ ntanetị nwere ike iji mpempe akwụkwọ a iji mee ka ọrụ ha rụọ. Ị nwere ike ịnweta ozi sitere na TripAdvisor na Trivago ma nwee ike ịmalite njem ọnụ njem gị n'ụbọchị ole na ole Source .